Izingxenye zefektri, abahlinzeki - China Izingxenye Zabenzi
I-Vibration exciter inamathiselwe kweminye imishini nemishini yokukhiqiza amandla okuzijabulisa, yingxenye ebalulekile yokusetshenziswa kokudlidliza kwemishini. Isikhuthazi sokudlidliza singenza into ithole uhlobo oluthile nosayizi wokudlidliza, ukuze kwenziwe ukuhlolwa kokudlidliza namandla entweni, noma kulinganise ithuluzi lokuhlola ukudlidliza kanye nenzwa.
Ipuleti ngesihlungo, owaziwa nangokuthi ipuleti elingenalutho, inokugqoka okuhle kokugqoka, impilo ende yokusebenza, ukumelana nomswakama nokuqina kokugqoka. Ifanele ukuwashwa, ukuhlungwa, ukugrediwa, ukuqedwa phansi, ukudilizwa, ukukhishwa kwamanzi nezinye izimboni zemishini.
Isethi yamabhulokhi e-eccentric eguquguqukayo afakiwe kuzo zombili iziphetho zetshezi le-rotor, futhi amandla athokozisayo atholakala ngokusebenzisa amandla we-centrifugal akhiqizwa ukujikeleza kwejubane elikhulu le-shaft nebhulokhi eccentric. Ububanzi bemvamisa ye-vibration yemoto yokudlidliza bukhulu, futhi umsindo we-mechanical ungancishiswa kuphela uma amandla ajabulisayo namandla ehambelana kahle.
Ingxenye yokusebenza kwesidlidlizi isilinda esiyindilinga esimise okwenduku nesidlidlizi esimile ngaphakathi. Iqhutshwa yimoto, ingaveza ukudlidlizela okuphezulu kakhulu kanye ne-micro amplitude vibration. Imvamisa yokudlidliza ingafinyelela ku-12000-15000 izikhathi / min. inomphumela omuhle wokudlidliza, isakhiwo esilula nempilo ende yokusebenza. Ifanele imishayo yokudlidliza, amakholomu, izindonga nezinye izinto nokhonkolo omkhulu.